IPortrush, indawo entle ebanzi ephakathi
Indawo enkulu yale mihla kumbindi wePortrush. Ibhodi yabakhenkethi yeNI yamkelwe.
I-Wifi, i-Smart TV, i-sofa yekona ehleli kamnandi kunye nazo zonke ezinye izinto eziluncedo ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto yokuphumla kunye namava okonwaba ngelixa ujonga izinto kunye nemiboniso yoNxweme oluMantla olumangalisayo.
Imizuzu emi-5 uhambe uye kubhaso olu-2 oluphumelele iilwandle zeflegi eluhlaza kunye nemizuzu eli-10 uhamba ukuya eRoyal Portrush Golf Club kwaye ukufutshane kakhulu neendawo zokutyela, iivenkile, iikhefi kunye nemivalo.
I-1 x Igumbi leKumkani kunye ne-1 x igumbi eliphindwe kabini kunye negumbi lokulala elinebhanti. Kukho izinto zokudlala kunye neencwadi zabantwana ukuba ziyafuneka kunye nemidlalo yasebhodini kwimeko yezo ntsuku zemvula. Isandul' ukuhonjiswa kuyo yonke ifanitshala entsha kunye nefenitshala enezihombiso ezimnandi.
4.95 ·Izimvo eziyi-269
4.95 · Izimvo eziyi-269
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi269
58A Main Street, Kukho isitshixo sesefu sokuzihlola okanye udibane kwigumbi lokuhlala ukuze unike izitshixo emva koko ndikuvumele ukonwabele ukuhlala kwakho kodwa ndishiyekelwe yimizuzu embalwa ukuba ufuna nantoni na.